SteamVR Beta nyowani nekuvandudza kweLinux | Linux Vakapindwa muropa
Valve yaburitsa Indekisi yevharuvhu uye kamwe kunze, iyo inozivikanwa femu inoenderera nekuvandudza nekukurumidza pairi SteamVR, chimwe chezvinhu zvinovimbisa chaizvo zvigadzirwa zveLinux. Ikozvino Beta yekupedzisira yaburitswa yatovepo uye ine inonakidza kuvandudzwa kweiyo chaiyo magirazi magirazi uye zvakare zvimwe zvinokanganisa zvinokanganisa Linux. Saka nhau dzakanaka.
Wakagadzira kumwe kugadzirisa yeSteamVR neshanduko mumitambo inotangwa sei kubva pachinhu ichi chaicho chepuratifomu yekudzora kubonderana, zvinhu zvachinja kudzivirira Error 308 pakutanga, otomatiki kupora kwawedzerwa kune firmware ye Valve Index uye HTC Vive Pro, pamwe nezvimwe zvipenga zvakagadziriswa zvakasimuka zvega muValve system uye zvakakonzera kudzima.
SteamVR Input zvakare ine dzimwe shanduko. Nezve iyo nhau dzinobata zvakananga Linux, unogona kuwana:
Kugadzirisa Index HMD yaigara ichitaura kuti firmware inogadziridza yaivepo.
Kugadzirisa dambudziko rinogadzirisazve SteamVR
Gadzirisa vrwebhelper ichirovera iyo Steam mutengi
Gadzirisa psychedelic mavara mune iyo Steam mutengi inokonzerwa nekubuda kweSteamVR.
Tangazve SteamVR Buda nekukurumidza Kugadzirisa uye Kutangazve Block
Akasiyana vrcompositor bugs akagadziriswa
Ioctl kururamisa (GFEATURE)
Sezvaunogona kutarisa ivo vari matambudziko, chii chakaita chiitiko pawanga uchishandisa SteamVR uye Steam pane yako Linux distro, chimwe chinhu chisina kunaka. Saka ikozvino kuuraya kunenge kusisina kunetsa. Uye zvechokwadi, basa revagadziri veValve harina kungogumira kuLinux chete, vakaisawo zvimwe zvigadziriso zvemamwe mapuratifomu. Ndinovimba inoenderera seizvi uye isu tine dzimwe nhau dzekutaura nezvako munguva pfupi.
Nenzira, software SC Mutongi uye Steam Mutyairi mutyairi zvakagadziriswa zvakare. Nhau zhinji kubva kuValve, pamwe nezvandakataura nezve inogona kuburitswa yekuvandudza kune iyo Steam Mutongi...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » SteamVR Beta nyowani nekuvandudza kweLinux